सातौँ महाधिवेशनको दस्ताबेजप्रति सुझाव
हाम्रो गौरवशाली पार्टीको यही पुस २५ देखि हुनलागेको सातौँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा पार्टीपङ्क्तिमा बहसछलफलका लागि वितरित विधान तथा प्रतिवेदनका सम्बन्धमा पार्टी कमिटीका कमरेडहरूको सुझावसमेत समाविष्ट गरी प्रस्टताका लागि यो सुझावपत्र प्रस्तुत गरेको छु ।
१. कुनै पनि पार्टीको आधारभूत पक्ष भनेको विधान नै हो । यो व्याख्यात्मक नभएर सूत्रात्मक र गहन हुन्छ । यो सङ्क्षिप्त र सघन हुन्छ । यसैका आधारमा बाँकी कुराहरूको व्याख्या–विश्लेषण गर्ने र उत्तर दिइने गरिन्छ । विधान केही लामो र भद्दा किसिमको छ । यसका कतिपय सन्दर्भहरू प्रस्ट छैनन् । भाषा, व्याकरणका दृष्टिले मात्र नभई प्रयोगका दृष्टिले पनि त्रुटिपूर्ण छ । विधानको भाषा प्रस्ट, सरल र व्याकरणका दृष्टिले पनि शुद्ध हुनु आवश्यक छ । विधानमा विरोधाभासपूर्ण, द्वैअर्थी र जटिलता उत्पन्न गर्ने शब्दको प्रयोग नगर्दा नै राम्रो हुन्छ ।
३.छापको आकार अथवा लोगो ठीक भए पनि व्याकरणगत दृष्टिले कमुनिस्ट प्रयोग गरी सच्याउनु आवश्यक छ ।
४.धारा २ को उपदफा ६ मा लेखिएको छ : “उत्पीडित जातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सिद्धान्ततः स्वीकार गर्दै जातीय र क्षेत्रीय आधारमा स्वायत्ततासहितको सङ्घीय व्यवस्था अवलम्बन गरिनेछ ।”
क्रान्तिकारीहरूको उद्देश्य सङ्घीयता होइन, स्थानीय तहदेखि माथिसम्म जनताको सत्ता-जनसत्ता हो । नेपालको भूराजनीतिक परिस्थितिमा कस्तो किसिमको सत्तागत संरचना आवश्यक छ भन्ने कुरा बहस र विवादको विषय छ । सङ्घीयतालाई शक्ति, साधन, स्रोत र सामथ्र्यको विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताका रूपमा लिनुपर्दछ । सङ्घीयतालाई प्रधान पक्षजस्तो गरी प्रस्तुत गरिएको छ र नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशाभन्दा बढी महत्व दिएर जसरी प्रस्तुत गरिएको छ, यसले प्रश्नहरू उठ्नु/उठाउनु स्वाभाविक बनेको छ । सङ्घीयता साधन हो, साध्य होइन र कम्युनिस्टहरूको नारा पनि होइन । बहसछलफलमा सार्वजनिक रूपमा आएपछि धारणा बनाउने कुरामा विमति छैन । तर यसलाई नयाँ जनवादी क्रान्तिको महत्वपूर्ण अंशझैँ गरी जसरी अगाडि बढाइएको छ, यसले वर्गीय अन्तर्विरोधको हलको प्रश्नलाई ओझेलमा पारेको छ र सङ्घीयताभित्र नै सबै कुरा पाउन सकिन्छ भनेजस्तो बोध भएको छ । स्थानीयदेखि माथिसम्म कस्तो संरचना हुने कुरा नयाँ जनवादी क्रान्तिसित जोडिएको प्रश्न हो । सङ्घीयतालाई नयाँ जनवादी क्रान्तिकै हाराहारीमा राखेर साध्य नै बनाएर जसरी लैजान खोजिएको छ, यो त्रुटिपूर्ण छ ।
नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक परिवेश र साम्राज्यवादी-विस्तारवादी चलखेललाई ध्यानमा राखेर मात्र यसबारे निर्णय र निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ । सङ्घीयताको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षमा थप बहसको आवश्यकता छ । जहाँसम्म आत्मनिर्णयको कुरा छ, यो पनि निकै बहस र छलफलको विषयको कुरा हो । रूसको विशिष्ट परिस्थिति, त्यहाँका ‘राष्टहरू’ को अवस्था र संरचनाका सम्बन्धमा लेनिनले उठाउनु भएको सन्दर्भ र अर्थ र नेपालको ‘जातीय’ स्वरूप र स्थितिसित सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक कुनै किसिमले पनि मेल खाँदैन र लागू पनि हुन सक्तैन । त्यहाँको विशिष्ट परिस्थितिमा पनि लेनिनले वर्गीय प्रश्न नै प्रधान हो भनेर बारम्बार जोड दिनुभएको कुरा यहाँ स्मरणीय छ ।
उत्पीडित जातजाति, क्षेत्र र लिङ्गको मुक्तिको कुरालाई जोडदार रूपमा सैद्धान्तिक तहबाट मात्र नभएर, व्यवहारकै तहबाट उठाएर वर्गीय मुक्ति आन्दोलनसित जोडेर लानुपर्दछ र हल गर्नुपर्दछ । वर्गीय प्रश्नलाई ओझेलमा राखेर अथवा यसप्रति उदासीन भएर सङ्घीयतामार्फत सबै उत्पीडित तह र तप्काको जादुमय किसिमले मुक्ति हुन्छ भनेजस्तो गरी जातीयता र आत्मनिर्णयको कुरालाई जसरी उठाइएको छ, यो वैज्ञानिक, व्यावहारिक र मार्क्सवादसम्मत छैन । सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग, जातजाति, क्षेत्र र लिङ्गको मुक्तिसित गाँसिएको नेपालको विशिष्टताको ‘स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको जनसत्ताको निर्माण (संरचना) गरौँ’ भन्ने हाम्रो नारा हुनुपर्छ । नयाँ जनवादी क्रान्तिको नारालाई ओझेलमा पार्ने गरी जसरी सङ्घीयता–सङ्घीयता भनेर जोड दिने गरिएको छ र ‘जातीय आत्मनिर्णय’ भन्ने गरिएको छ, यो अवैज्ञानिक र विरोधाभासपूर्ण छ । जहाँसम्म सिद्धान्ततः स्वीकार गर्दै भन्ने कुरा छ यो पनि त्रुटिपूर्ण छ । मार्क्सवादीहरू व्यवहारबिनाको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दैनन् । मार्क्सवादी हुनु भनेको नै सिद्धान्तको व्यवहारमा रूपान्तरणको पक्षलाई स्वीकार गर्नु हो । व्यवहारमा लागु नहुने वा नगर्ने यो कस्तो सिद्धान्त हो ! सिद्धान्तमा स्वीकार गर्ने र व्यवहारमा अस्वीकार गर्ने कुरा अवैज्ञानिक र मार्क्सवादका विपरीत कुराहरू हुन् । यसका लागि जनस्वायत्तता अथवा जनताको स्वशासन पदावली प्रयोग गर्नु सही हुन्छ ।
८. धारा १४ को १ मा विभिन्न विभागहरूको नाम दिइएको छ । विभाग भनेको आवश्यकताअनुसार घटबढ गर्न सकिने, नयाँ थपिने र समयसन्दर्भमा कतिपयलाई हटाउनुपर्ने खालको प्रावधान हो । विधानमा यसरी सबै विभागको नाम उल्लेख गर्नु आवश्यक छैन । विधानमा “आवश्यकताअनुसार विभिन्न विभागहरू गठन गर्न सकिनेछ ।” भनेर मात्र उल्लेख गर्दा राम्रो हुन्छ ।
३.बुँदा नम्बर ८ मा अनुकूलता र प्रतिकूलताको प्रश्न अन्तर्गत उपशीर्षक छुट्याए क. अनुकूलता र ख प्रतिकूलता गर्दा विषयवस्तु राम्रोसित छुट्टिन्छ।
१. ‘अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन र नयाँ संभावनाहरू’ शीर्षकको अन्तर्राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता उपशीर्षकअन्तर्गत रिमको पुनर्गठनको सन्दर्भ उठाइएकोछ । यसबारे थप व्याख्या आवश्यक छ । नयाँ रिमको गठनमा हाम्रो पार्टी, भाकपा (माओवादी) लगायत आरसिपि अमेरिका, ईटाली र अफगान माओवादीहरू र अन्य पार्टीहरूबीच मतभेद छन् । हामीहरू र भारतका कमरेडहरूबीच समान धारणा बनाउनु आवश्यक छ । मूल समस्या आरसिपि अमेरिकासित हो । यस सन्दर्भमा वैचारिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिमा हाम्रो भूमिका महत्वपूर्ण हुनु आवश्यक छ । जनयुद्ध लडेको पार्टीका नाताले यसको अगुवाइ हामीले गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको विश्वमाओवादी आन्दोलनको विवाद र ‘न्यु सिन्थेसिस’ का बारेमा हाम्रो धारणा प्रस्टताका साथ दस्ताबेजीकरण हुनुपर्दछ ।
क.नेतृत्वको केन्द्रीकरणदेखि दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन र ‘प्रचण्डपथसम्म’ आउँदाका केही कुरा विवरणात्मक किसिमले आएका छन् । तर यी सबै प्रक्रियामा क्रान्तिकारी धारबाट पनि कहा“, के कुरामा र कसरी कमजोरी भयो प्रस्टताका साथ खुलेर घटनासन्दर्भसहित आउनुपर्छ । यो इतिहासको समीक्षा हो, जसको बढी जिम्मोवारी छ, योगदान पनि र कमजोरी पनि त्यही हिसाबले मिलान हुनुपर्छ ।
छ . पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा र क्रान्तिको बाटो अन्तर्गतको भाग महत्वपूर्ण भाग हो । यहाँ नयाँ जनवादी कार्यदिशाका लागि कार्यनीतिक शृङ्खला प्रस्ट हुनुपर्दछ । यो सारसङ्ग्रहवादीजस्तो, अस्पष्टजस्तो छ । ४, ५, ६ बुँदामार्फत तीनवटा कार्यदिशा हुन सक्ने भनी उल्लेख गरिएको देखिन्छ । अझ सातौँ बुँदाले त शङ्का र भ्रम उत्पन्न गराएको छ । मूल प्रतिवेदन यस्तो विरोभासपूर्ण हुनु हुँदैन । यसमा के हो कार्यदिशा ठोस रूपमा किटान गर्नुपर्दछ, हुनुपर्दछ । अर्को कुरा दीर्घकालीन प्रकृतिको भनेर मात्र पुग्दैन । यो भनेको के हो प्रस्ट पार्नुपर्दछ । विद्रोह पनि उल्लेख गरिएको छ, तर यो विद्रोहको स्वरूप प्रस्ट छैन । अहिले पार्टीले ‘जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह’ भनेर कार्यंदिशासम्बन्धी धारणा अघि सारेको छ । यसको व्याख्या हुनुपर्दछ । यसको व्याख्या व्यवहारमा फरकफरक किसिमले हुन थालेको पाइएको छ । यो धारणा आफैँमा सारसङ्ग्रहवादी छ । प्रस्टताका साथ ‘पार्टीको अबको कार्यदिशा दीर्घकालीन जनयुद्ध हुनेछ’ भनेर दस्ताबेजमा प्रस्टताका साथ उल्लेख हुनु पर्दछ ।
नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रमसम्बन्धी राजनीतिक प्रस्ताव
यो यस दस्ताबेजको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यससित सम्बद्ध विषय अन्य शीर्षकहरूमा आइसकेको भए तापनि यसलाई भिन्नै शीर्षक दिएर जसरी प्रस्तुत गरिएको छ, यसले यसप्रतिको गम्भीरतालाई पुष्टि गर्दछ । तर यहाँ केही कुरा प्रस्ट हुनु आवश्यक छ ।
४. त्यसैगरी २० बुँदाको ४ उप बुँदामा लेखिएको छ : ‘जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयता ।’ सङ्घीयता र जातीय पहिचानको विषयले लामो व्याख्या–विश्लेषण र छलफलको माग गर्दछ । माथि विधानको चर्चाका सन्दर्भमा पनि केही कुरा उठाइएको छ । सङ्घीयताका सन्दर्भमा समेत थप बहसछलफलको आवश्यकता रहेको अवस्थामा ‘जातीय पहिचान’ आफैंमा एउटा जटिल प्रश्न हो । लेनिनले भन्नुभएको राष्ट्रहरूको सन्दर्भ नेपालको जातीय संरचना र स्वायत्ततासित मेल खादैन । ‘जातीय’ पदावलीको नेपालमा प्रयोग र बुझाइको पनि विशिष्ट पक्ष छ । यसका बारेमा आवेग र अन्धता त्याज्य छन् । यसमा नेपालको विशिष्टतालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ । साथै यहाँ जाति ( नेसन ) को विकासको स्थितिका बारेमा पनि प्रश्न उठाउन सकिन्छ । साम्राज्यवादको स्वार्थलाई ध्यान दिएर यसप्रति गम्भीरता अँगाल्नु आवश्यक छ । सङ्घीयता आवश्यक छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्दा पनि ‘जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयता’ का ठाउँमा नेपालको भौगोलिक, ऐतिहासिक, भाषिक, सांस्कृतिक र जातजातिगत विविधतालाई ध्यान दिँदै , ‘नेपाली विशिष्टताको सङ्घीयता’ भन्नु आवश्यक छ । अझ ठोसमा भन्नुपर्दा यसलाई ‘राष्ट्रिय पहिचानसहितको सङ्घीयता’ भन्नु उचित हुन्छ । यथार्थतः जातीय पहिचान होइन, राष्ट्रिय पहिचान हो ।
६. राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गबारे थप व्याख्या आवश्यक छ । नेपालमा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग कुन हो र त्यसको भूमिका कस्तो रहेको छ । यो अहिले व्यवहारमा छ कि छैन ? यसबारे थप व्याख्या र छलफल आवश्यक छ ।७. त्यसैगरी ३२ औं बुँदामा लेखिएको छ : “नेपाल अर्धसामन्ती र नवऔपनिवेशिक अवस्थामा छ । तसर्थ, सैद्धान्तिक रूपमा नेपाली क्रान्तिको बाटो दीर्घकालीन जनयुद्धकै बाटो हो । परन्तु, यसका लागि लामो तयारीको आवश्यकता पर्दछ । साथै, अहिलेको विशिष्ट स्थितिमा जनविद्रोहको सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिंदैन र त्यसतर्फ पनि आवश्यक ध्यानदिन जरुरी छ ।”
यसमा सारसङ्ग्रहवादी र गोलमटोल किसिमले होइन, प्रस्टताका साथ आउनुपर्दछ । जनयुद्धको आड र जगबिनाको अथवा सशस्त्र तयारीबिनाको विद्रोहको अर्थ छैन । “विशिष्ट स्थितिमा जनविद्रोहको सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिदैन” भनिएको छ । तर यो भनाइ अमूर्त छ । यसमा प्रस्टै किटान हुनुपर्छ, यो विशिष्ट स्थितिमा पनि जनसेना र जनताको सशस्त्र सङ्घर्षको जग र आड नपाएको विद्रोह अन्ततः विगतका आन्दोलनहरू जस्तै नयाँ शोषक वर्गको हातमा पुग्छ ।
लुसान सम्मेलनको सेरोफेरोमा आवश्यक परे आफू पुनः छापामार युद्धको नेतृत्व गरेर जाने भनेर कमरेड माओले गर्नुभएको उद्घोष पनि यहाँ स्मरणीय छ । सारमा र सत्य केरा के हो भने नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा मूलतः जनयुद्ध नै हुन्छ l नेपाली समाजको विशिष्टतामा अन्तत: यसले दीर्घकालीन स्वरूप ग्रहण गर्छ नै । यसलाई 'नेपाली विशिष्टताको जनयुद्ध' पनि भन्न सकिन्छ ।
८. जनमुक्ति सेनाका सम्बन्धमा तथ्य प्रस्ट हुन सकेको छैन । जस्तो दस्ताबेजमा लेखिएको छ : “२०५२ सालमा ने.क.पा. (माओवादी) द्वारा महान् जनयुद्धको थालनी गरियो । त्यो रक्षा र सन्तुलनको चरण हुँदै विकसित भयो । पार्टी विस्तृत र मजबुत बन्दैगयो । तीन डिभिजनसम्म जनमुक्ति सेना नेपालको संरचना तयार भयो ।” चुनवाङ बैठकको समयमै सात डिभिजनको घोषणा गरिएको यथार्थ यहाँ स्मरणीय छ ।